Wabiga Shabelle oo laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo iyo qeylo dhaan laga soo saaray - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wabiga Shabelle oo laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo iyo qeylo dhaan...
Wabiga Shabelle oo laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo iyo qeylo dhaan laga soo saaray
Waxaa laga cabsi qabaa fatahaad uu sameeyo wabiga Shabelle, iyadoo saacadihii la soo dhaafay uu wabigu aad u biyo keenay, waxaana bilowday dadaalo looga hortagayo fatahaad uu sameeyo wabiga.
Wasiir kuxigeenka Beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa sheegay in laga soo deegaanka Deefoow ee Gobolka Hiiraan ilaa degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku jiraan 59 Goobood oo laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo Wabiga Shabeelle.
Sidoo kale waxaa bilowday in goobaha laga cabsi qabo inuu wabiga ka fataho in lagu xoojiyo jawaano carro ka buuxo, waxaana dadaaladan si wadajir ah u wada maamulada degmooyinka iyo dadka deegaanka.
Fatahaada wabiga shabelle ayaa sanadihii u dambeeyay soo noq-noqday, mana jirin qorshe dhameystiran oo wax looga qabtay fatahadaas, sanad-walbana marka uu wabiga biyo keeno waxaa bilaabata qeyla dhaan iyo barakac ay sameeyana dadka deegaanka.
Wabiga Shabeelle oo mara Saddexda Gobol oo kala ah Labada Shabeelle iyo Hiiraan ayaa fatahaadii ugu weyneyd wuxuu sanadkii tegay ee 2019 ka geystay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan,i yada oo fatahaada ay dad ku dhinteen kumanaan qoysas ku barakaceen.